Fampianarana - Mampifandray ny tsenan'ny asa sy ny fampianarana ny INSPMAD
Fampianarana – Mampifandray ny tsenan’ny asa sy ny fampianarana ny INSPMAD
Tanjona ho an’ny sekoly fampianarana ambony INSPMAD ny tsy hisian’ny tanora tsy an’asa na ny « chômage zéro ».
Vahaolana ho an’ireo tanora maro tsy an’asa no tanjona
Mbola maro ireo tanora manana diplaoma nefa tsy an’asa eto amintsika. Isany olana ny tsy fifandraisan’ny fianarana amin’ny tsenan’ny asa. Noho izany dia manao ny ezaka ny sekoly ambony INSPMAD mba hampifandraisana ny fampianarana sy ny asa. Misy araka izany ny paikady omena ny tanora mba hanamorana ny fahitany asa toy ny « fahazotoana, fikarohana, fampiharana ny zavatra nianarana », araka ny fanazavan’andriamatoa Rabarioela Rado, mpanabe eo anivon’ny INSPMAD nandritra ny famoahana ireo mpianatra 151 avy ao amin’ny Polytechnique INSPMAD izay nanaraka ny fiofanana momban’ny lalàna, « technique des affaires », fitantanana orinasa, varotra iraisam-pirenena ary ny « transit et douane » ny zoma teo teny By pass.
Manaraka ireo paikady hanafoanana ny INSPMAD. cc : Toria Dimbiniaina
Ankoatra izay dia misy ny fiarahamiasa eo amin’ity sekoly ambony ity sy ireo orinasa maro eto Madagasikara. Izany hoe fiaraha-miasa amin’ireo orinasa na eto an-drenivohitra na any amin’ny faritra.
Miezaka ihany koa ity sekoly ity ny manao fizohiana ny fiafaran’ireo mpianatra mivoaka ao aminy. Tanjona ny tsy hisian’ny tanora tsy an’asa na ny « chômage 0 ».
Anisany tombony ho an’ny mpianatra ao amin’ny INSPMAD araka ny fanazavan’ireo mpanabe ny fananana traikefa, fahalalana satria ny mpampianatra ao dia manana ny fahaizana sy ny traikefa ary ny kalitao ho an’ireo mpianatra.
Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fiaraha-miasa ataon’ity sekoly ambony ity amin’ny sehatra any ivelany. Vokatra izany dia misy amin’ireo mpianatra nivoaka tao amin’ny INSPMAD no efa miasa any Quebec amin’izao.
« Hitohy hatrany ny fanamorana ny fahazoan’ny mpianatra asa any ivelany »
hoy ireo mpanabe